क्युट आर्यन - मनोरञ्जन समाचार - प्रकाशितः श्रावण ३२, २०७४ - साप्ताहिक
रेखा थापा र आर्यन सिग्देलबीच सम्बन्ध लगभग पानी बाराबारकै स्थिति थियो । रेखाले बनाउने भइन्, चलचित्र रुद्रप्रिया । पुरानो बैमन्यस्यताको अन्त्य गरियो, आर्यन भए रुद्र, रेखा बनिन् प्रिया । सात वर्षपछि सिल्भर स्क्रिनमा छाउन लागेको यो जोडीले मज्जाले नाचेको रुद्रप्रियाको एउटा गीतको भिडियो सार्वजनिक भैसकेको छ ‘चिरबिर चिरबिर’ । अहिलेका हटकेक संगीतकार राजनराज शिवाकोटीको संगीतमा तयार भएको उक्त डान्सिङ नम्बरमा रेखा र आर्यन मस्तसंग नाचेका छन् । भिडियो हेर्नेहरूले चलचित्र रुद्रप्रियामा आर्यन ‘क्युट’ अर्थात कलिलो देखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
हुन पनि आर्यन रुद्रप्रियाको उक्त गीतमा निकै छरितो ठिटो देखिएका छन् । भनेपछि रुद्रप्रिया आर्यनको करियरको अर्को कोसेढुंगा सावित हुँदैछ ? अनौपचारिक कुराकानीमा आर्यनले भने– ‘म आफूलाई चरित्रमा ढालेर प्रस्तुत गरिरहेको हुन्छु । रुद्रप्रियामा पनि त्यस्तै गरेको हुँ । अब कोसेढुंगा बन्छ कि बन्दैन थाहा भएन तर चलचित्र चाहिँ राम्रो बनेको छ ।’
यसबीच पाँच पटक नो ?
आर्यन सिग्देललाई काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले पुन: एकपटक निराश पारेको छ । अमेरिकामा अर्को शनिबार आयोजना हुने एउटा चलचित्र एवार्डमा सहभागिता जनाउन आर्यनले दूतावासमा दिएको भिसा आवेदन रद्द भएको छ । आर्यनले अमेरिकाको भिसा नपाएको यो पहिलो पटक भने होइन ।
यसअघि चार पटक भिसाका लागि गरिएको उनको प्रयास असफल भैसकेको छ । पासपोर्टमा आर्यनको नाम हरिश सिग्देल भएका कारण पनि उनले भिसा प्राप्त गर्न समस्या भैरहेको बताइन्छ । भनिन्छ, आर्यन उक्त एवार्डका लागि अमेरिकी भिसा नपाउने एक्ला कलाकार होइनन्, आर्यनसँगै अभिनेत्री सुरबिना कार्की, अभिनेता आयुष रिजाल, नृत्य निर्देशक कविराज गहतराज, संगीतकार ताराप्रकाश लिम्बू आदिलाई पनि दूतावासले निराश तुल्याएको छ । अनमोल केसी, टीका पहारी, दीपाश्री निरौला, जितु नेपाल, केदार घिमिरे, रवीन्द्र खड्का, नवल खड्कालाई भने दूतावासले पत्याएको छ ।